Faah faahin:- Dad la socday Meyd oo lagu rasaaseeyay duuleedka magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dad la socday Meyd oo lagu rasaaseeyay duuleedka magaalada Muqdisho
Koox hubeysan ayaa la sheegayaa inay rasaas ooda kaga qaadeen gawaari galbinaysay qof meyd ah oo maraayay inta u dhaxeeysa deegaanka Ceelasha Biyaha iyo Siinkadheer ee duuleedka magaalada Muqdisho.
Gawaarida la rasaaseeyay ayaa la sheegayaa inay la socdeen qoyska leh sarta Xaaji Gaaboow oo ku taalla degmada Dharkeenleey ee magaalada Muqdisho, waxaana ay xilligaasi wadeen meydka qof ka mid ah eheladooda oo geeriyooday.
Illaa 6 qof ayaa la xaqiijiyay inay rasaastaasi ku geeriyootay, halka 4 qof kalena ay ku dhaawacantay, sida uu inoo xaqiijiyay qof ka mid ahaa dadkii gaarigaasi la socday oo rasaastaasi ka bad-baaday.
Dadkaasi la rasaaseeyay ayaa la sheegayaa inay markoodii hore kasoo amba-baxeen degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeday degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose, si ay halkaasi ugu soo aasaan meydka ay wadeen.
Dhinaca kale, lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay weerarkaasi lagu qaaday dadkaasi shacabka ah, waxaana inta badan falal ceynkaan oo kale ay hore uga dhaceen wadada u dhaxeeysa Muqdisho iyo Afgooye.